VIDEO: Ciidanka Puntland oo weerar ku qaaday malayshiyaad isku urursanayey duleedka Garoowe. | WWW.REGULARNEWS.NET
VIDEO: Ciidanka Puntland oo weerar ku qaaday malayshiyaad isku urursanayey duleedka Garoowe.
Puntlandtimes (Garoowe)-Ciidanka ammaanka gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garoowe ayaa ku guulaystay inay burburiyaan dhismayaal laga dhisayey duleedka Garoowe oo xiisad abuuray iyo kala kacayrinta malayshiyaad isku urursanayey goobtaasi.
Howlgalkaan oo uu hoggaaminayey taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle sare Maxamed Aadan Jaamac ayaa waxaa lagu burburiyey dhismayaal sharci darro ah oo laga samaynayey duleedka Bari ee magaalada Garoowe.
Taliyaha Qaybta booliiska Gobolka Nugaal gaashaanlen sare Maxamed Aadan Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowlada Puntland ka go’an tahay sidii wax uga qaban lahayd Dadka caadaytey dhismayaasha sharci darada ah Dhulalka.
Waxa uu sheegay in mudadii uu howlgalkaani socdey ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan malayshiayad isku urursanayey dhismayaashaasi isla markaana ay sharciga horgeyn doonaan si loogu kala saaro dhulkaasi oo horay laysugu xabadeeyey dhowaan.